Kunze Mitero | Yangu Mota Kunze
Uri kupinza mota kupi?
Marii yaunofanira kubhadhara kana mota yako iri mukati meEU?
Kana iwe uri kuunza yechipiri-ruoko mota kuUK, haufanire kubhadhara VAT - chero bedzi iwe wakabhadhara VAT mune imwe nyika yeEU pawakatenga iyo, asi iwe uchiri kufanira kuzadza NOVA (ziviso yekuuya kwemotokari ) kuzivisa kuHMRC mukati memazuva gumi nemana kubva pakasvika mota
Kana iwe uchigara uchigara kune imwe nyika muEU uye uchiuya nemotokari newe pakushanya kwenguva pfupi kuUK, haufanire kuzivisa HMRC, sekureba sekugara kwako kuri pasi pemwedzi mitanhatu mumwedzi gumi nemaviri.
Kana iwe uri pakushanya kwenguva pfupi asi wafunga kunyoresa zvachose mota yako kuUK une mazuva gumi nemana ekuzivisa HMRC mushure mesarudzo yako.
Marii yaunofanira kubhadhara kana mota yako ichibva kunze kweEU?
Kuenda kuUnited Kingdom pasi pechirongwa cheToR
Kana urikufamba kuenda kuUK uye uchida kuuya nemotokari yako newe haufanire kubhadhara chero mutero wekunze kana VAT. Izvi zviri kukupa kuti uve nemotokari kwemwedzi inopfuura mitanhatu uye wakagara kunze kweEU kwemwedzi inopfuura gumi nemiviri. Tinoda invoice yako yekutenga kana gwaro rekunyoresa kuratidza urefu hwemotokari uye nemwedzi gumi nembiri yekushandisa bhiri, chirevo chebhengi kana chibvumirano chekutenga / chemba kuratidza nguva yawakagara munyika.
Mota dziri pasi pemakore makumi matatu ekuberekwa
Yakagadzirwa kunze kweEU: Kana iwe ukapinza mota kubva kunze kweEuropean Union (EU) iyo yakavakwa zvakare kunze kweEU uchafanirwa kubhadhara 10% yekubhadhara mutero uye 20% VAT kuti ubudise kubva kuUK tsika. Izvi zvinoverengerwa pamari yawatengera mota munyika yauri kuendesa kunze.
Yakagadzirwa mukati meEU: Kana iwe ukapinza mota kubva kunze kweEU iyo yakatanga kuvakwa muEU semuenzaniso Porsche 911 yakavakwa muStuttgart, Germany. Iwe unofanirwa kubhadhara yakaderedzwa yakadzikira chiyero chebasa rinova £ 50 uyezve 20% VAT kuti ubudise iyo kubva kuUK tsika.
Classic mota dzinopfuura makore makumi matatu ekuberekwa
Muna 2010 pakanga paine chiitiko chakakosha chakakundwa chakanangana neHMRC iyo yakachinja mirawo yekuti tinounza sei mota dzinopfuura makore makumi matatu ekuberekwa. Kazhinji mota dziri munzvimbo yadzo yepakutanga, pasina shanduko yakakura kune chassis, steering kana braking system neinjini, angangoita makore makumi matatu ekuberekwa, uye yemhando kana mhando iyo isisiri mukugadzirwa ichaiswa pasi peiyo nhoroondo ye zero basa uye 30% VAT.
Kana mota dzakavakwa pre 1950 saka dzinobva dzango pinda padanho rekare re zero zero basa uye 5% VAT. Zvakare, ruzhinji rwe mota dzekare zvakare MOT Inoregererwa kana anopfuura makore makumi mana ekuberekwa.
Inowanzo bvunzwa mibvunzo nezve mota inopinza mutero uye mabasa
Chii chinonzi Notification YeMotokari Vanosvika chirongwa?
Kugadzirisa zvirinani mutero wemutero wekupinza mota iyo HMRC yakaunza iyo NOVA system. Iri panzvimbo yekuona kuti VAT inobhadharwa kune zvinounzwa kunze uye inopa vanhu nzira dzekuita kudaro kuburikidza nepamhepo portal. Iyo NOVA system inoshanda padhuze neDVLA kuvimbisa mota isingakwanise kunyoreswa kusvikira mutero wagadziriswa.
Mitengo yacho yakasiyana here nemotokari dzekutengesa?
Chokwadi. Mota dzakagadzirwa kunze kweEU dzakadai semarori kana mota dzinorema dzinogona kutariswa sekutenga kwekunze kunokwezva 22% yekubhadhara mutero panzvimbo peyakajairika 10% mota inowanzo kukwezva. Zvisinei, izvi zvinonyatsoenderana nemotokari. Usazeze kupinda mukutaurirana uye tinogona kupedzisa yako NOVA yekupinda sechikamu chebasa redu.
Mutero wekutenga wakasiyana nedhudhudhu here?
Midhudhudhu inoda kuti mabasa abhadharwe akasungirirwa pa6% kana 8% zvichienderana nehukuru hweinjini.
Unogona here kubatsira nekutengesa kunze?
Tinoshanda nevanhu vakazvimirira uye nemasangano ekutengeserana. Zvatakatora zviuru zvemotokari pamusoro pemakore apfuura isu tinogona kuraira uye kubatsira nekupinda kweNOVA - kunyangwe iwe urikupinza kunze seVAT yakanyoreswa mutengesi.